တစ်ဦးတည်းအလှူဖြင့် မြို့ပတ်ပြီး အောက်ဆီဂျင် လိုက်ဖြည့်ပေးတော့မည့် နန္ဒာလှိုင်တို့ ဇနီးမောင်နှံ | BurmeseAsia
Home News တစ်ဦးတည်းအလှူဖြင့် မြို့ပတ်ပြီး အောက်ဆီဂျင် လိုက်ဖြည့်ပေးတော့မည့် နန္ဒာလှိုင်တို့ ဇနီးမောင်နှံ
တစ်ဦးတည်းအလှူဖြင့် မြို့ပတ်ပြီး အောက်ဆီဂျင် လိုက်ဖြည့်ပေးတော့မည့် နန္ဒာလှိုင်တို့ ဇနီးမောင်နှံ
ကိုဇေသီဟ နှင့်မနန္ဒာလှိုင် မိသားစုမှတစ်ဦးတည်းအလှူရှင်အဖြစ် အောက်ဆီဂျင်များကိုကွန်တင်နာကားနဲ့တင်ကာမြို့ပတ်ပြီး အခမဲ့ဖြည့်တင်းလှုဒါန်းသွားမည်
ညဘက်တွင်လည်း ဇေကမ္ဘာ ဝင်းအတွင်းဖြည့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၂၄နာရီ ဖြည့်တင်းလှုဒါန်းနိုင်ရန်စီစဉ်နေကြောင်း အကယ်ဒမီ နန္ဒာလှိုင် သတင်းစကားပါး
ကိုဗစ်ရောဂါခံစားနေရသူများ အထူးလိုအပ်လျက်ရှိသည့် အောက်ဆီဂျင် များကို ကိုဇေ နှင့် မနန္ဒာလှိုင်မိသားစု မှ ရွေ့လျားအောက်ဆီဂျင် စက်ရုံဝယ်ယူကာ ကွန်တိန်နာ ကားဖြင့် မြို့ပတ်လိုက်ဖြည့် လှုဒါန်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သရုပ်ဆောင် နန္ဒာလှိုင်၏ မောင်ဖြစ်သူ ကိုစိန်ဖြိုးလှိုင်မှ ယင်း၏လူမှုကွန်ယက် ဖြစ်သည့်SEIN PHYo & YI ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာထက်တွင် အောက်ပါအတိုင်း သတင်းစကား ပါးခဲ့သည်.*****.စိတ်ညစ်စရာတွေပဲများနေလို့ သတင်းကောင်းလေးတင်ပေးပါမယ်…
အောက်စီဂျင်စက်ရုံ ( 50Nm3/h ) ကို မှာယူလိုက်ပါပြီ။
ကိုဇေနဲ့ မနန္ဒာ မိသားစုကတဦးတည်း အလှူရှင်အဖြစ်လှူမှာပါ… တစ်ရက်ကို 40L အလုံး ၂၀၀ ဖြည့်ပေးနိုင်မှာပါ။
ထူးခြားချက်ကတော့ စက်ရှိတဲ့ဆီလာဖြည့်စရာ မလိုပဲ ကွန်တင်နာကားနဲ့တင်ပြီး မြို့ပတ်ပြီး လိုက်ဖြည့်ပေးမှာပါ… ဒီသတင်းကြားကြားချင်း ပျော်လွန်းလို့..
အားလုံးပဲ ဖိုက်တင်း ဟု SEIN PHYO & YIလူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှရေးသားထားကြောင်းတွေ့ရသည်။
ထို့အပြင် အကယ်ဒမီနန္ဒာလှိုင် ကလည်း လူမှု့ကွန်ယက်မှတဆင့်ဖြည့်တင်းလှုဒါန်းမည့် အစီအစဉ် များကိုအောက်ပါအတိုင်းရေးသား အသိပေးခဲ့သည်
အားလုံးလိုအပ်နေတဲ့ အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံ တစ်ခုကို ဝယ်ဖို့ ရွေးချယ်လိုက်ပါပြီ။ အောက်ဆီဂျင် 50Nm3/h ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် တနေ့လျှင် 40L အိုးကြီး အလုံး ၂၀၀ ဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်။ လက်ရှိအနေအထားအရ အမြန်ဆုံးနဲ့ လူတွေ ပိုပြီးအကျိုးရှိစေမဲ့ အချက်ကို အဓိကထားပြီး ရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေ ဆီရောက်ဖို့အတွက် ပေ၂၀ ကွန်တိန်နာထဲထည့်ပြီး နေ့စဉ် လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့ ရပ်ကွက် မြို့နယ်တွေကို ပတ်ပြီး ထည့်ပေးပါမယ်။ ညဘက်ကျရင်လည်း ဇေကမ္ဘာ ဝင်းထဲမှာ ကားကို ရပ်နားပြီး ဖြည့်ပေးပါမယ်။ ၂၄ နာရီနီးပါးဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့ စီစဉ်ပါမယ်။ အခမဲ့ ဖြည့်ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်ခြေလှမ်းအတွက်လဲ ထပ်ကြိုးစားပါအုံးမယ်။
တစ်ခုပဲ အားနာမိပါတယ်။ အမြန်ဆုံးရောက်အောင် ကြိုးစားထားပေမဲ့ အခုမှ စမှာတာဖြစ်လို့ နဲနဲတော့ စောင့်ရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ စိတ်မလျှော့ကြပါနဲ့။ ကျွန်မတို့လိုပဲ တခြားအလှူရှင်တွေလဲ မကြာခင်ပေါ်လာတော့မှာပါ။
ကျန်းမာအောင်နေထိုင်ပေးကြပါရှင်…….ဟု အကယ်ဒမီနန္ဒာလှိုင် ကရေးသားထားသည်.
ကိုဇသေီဟ နှငျ့မနန်ဒာလှိုငျ မိသားစုမှတဈဦးတညျးအလှူရှငျအဖွဈ အောကျဆီဂငျြမြားကိုကှနျတငျနာကားနဲ့တငျကာမွို့ပတျပွီး အခမဲ့ဖွညျ့တငျးလှုဒါနျးသှားမညျ
ညဘကျတှငျလညျး ဇကေမ်ဘာ ဝငျးအတှငျးဖွညျ့ပေးသှားမညျဖွဈပွီး ၂၄နာရီ ဖွညျ့တငျးလှုဒါနျးနိုငျရနျစီစဉျနကွေောငျး အကယျဒမီ နန်ဒာလှိုငျ သတငျးစကားပါး
ကိုဗဈရောဂါခံစားနရေသူမြား အထူးလိုအပျလကျြရှိသညျ့ အောကျဆီဂငျြ မြားကို ကိုဇေ နှငျ့ မနန်ဒာလှိုငျမိသားစု မှ ရှလြေ့ားအောကျဆီဂငျြ စကျရုံဝယျယူကာ ကှနျတိနျနာ ကားဖွငျ့ မွို့ပတျလိုကျဖွညျ့ လှုဒါနျးသှားမညျ ဖွဈကွောငျး သရုပျဆောငျ နန်ဒာလှိုငျ၏ မောငျဖွဈသူ ကိုစိနျဖွိုးလှိုငျမှ ယငျး၏လူမှုကှနျယကျ ဖွဈသညျ့SEIN PHYo & YI ဖဘေု့တျစာမကျြနှာထကျတှငျ အောကျပါအတိုငျး သတငျးစကား ပါးခဲ့သညျ.*****.စိတျညဈစရာတှပေဲမြားနလေို့ သတငျးကောငျးလေးတငျပေးပါမယျ…
အောကျစီဂငျြစကျရုံ ( 50Nm3/h ) ကို မှာယူလိုကျပါပွီ။
ကိုဇနေဲ့ မနန်ဒာ မိသားစုကတဦးတညျး အလှူရှငျအဖွဈလှူမှာပါ… တဈရကျကို 40L အလုံး ၂၀၀ ဖွညျ့ပေးနိုငျမှာပါ။
ထူးခွားခကျြကတော့ စကျရှိတဲ့ဆီလာဖွညျ့စရာ မလိုပဲ ကှနျတငျနာကားနဲ့တငျပွီး မွို့ပတျပွီး လိုကျဖွညျ့ပေးမှာပါ… ဒီသတငျးကွားကွားခငျြး ပြျောလှနျးလို့..
အားလုံးပဲ ဖိုကျတငျး ဟု SEIN PHYO & YIလူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှရေးသားထားကွောငျးတှရေ့သညျ။
ထို့အပွငျ အကယျဒမီနန်ဒာလှိုငျ ကလညျး လူမှု့ကှနျယကျမှတဆငျ့ဖွညျ့တငျးလှုဒါနျးမညျ့ အစီအစဉျ မြားကိုအောကျပါအတိုငျးရေးသား အသိပေးခဲ့သညျ
အားလုံးလိုအပျနတေဲ့ အောကျဆီဂငျြထုတျလုပျတဲ့စကျရုံ တဈခုကို ဝယျဖို့ ရှေးခယျြလိုကျပါပွီ။ အောကျဆီဂငျြ 50Nm3/h ထုတျလုပျနိုငျတဲ့အတှကျ တနလြေှ့ငျ 40L အိုးကွီး အလုံး ၂၀၀ ဖွညျ့ပေးလို့ရပါတယျ။ လကျရှိအနအေထားအရ အမွနျဆုံးနဲ့ လူတှေ ပိုပွီးအကြိုးရှိစမေဲ့ အခကျြကို အဓိကထားပွီး ရှေးခယျြလိုကျတာဖွဈပါတယျ။ တကယျလိုအပျနတေဲ့ပွညျသူတှေ ဆီရောကျဖို့အတှကျ ပေ၂၀ ကှနျတိနျနာထဲထညျ့ပွီး နစေ့ဉျ လိုအပျခကျြရှိနတေဲ့ ရပျကှကျ မွို့နယျတှကေို ပတျပွီး ထညျ့ပေးပါမယျ။ ညဘကျကရြငျလညျး ဇကေမ်ဘာ ဝငျးထဲမှာ ကားကို ရပျနားပွီး ဖွညျ့ပေးပါမယျ။ ၂၄ နာရီနီးပါးဖွညျ့တငျးနိုငျဖို့ စီစဉျပါမယျ။ အခမဲ့ ဖွညျ့ပေးမှာ ဖွဈပွီး နောကျထပျခွလှေမျးအတှကျလဲ ထပျကွိုးစားပါအုံးမယျ။
တဈခုပဲ အားနာမိပါတယျ။ အမွနျဆုံးရောကျအောငျ ကွိုးစားထားပမေဲ့ အခုမှ စမှာတာဖွဈလို့ နဲနဲတော့ စောငျ့ရလိမျ့မယျထငျပါတယျ။ စိတျမလြှော့ကွပါနဲ့။ ကြှနျမတို့လိုပဲ တခွားအလှူရှငျတှလေဲ မကွာခငျပျေါလာတော့မှာပါ။
ကနျြးမာအောငျနထေိုငျပေးကွပါရှငျ…….ဟု အကယျဒမီနန်ဒာလှိုငျ ကရေးသားထားသညျ.
Next articleတကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ သူရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေဆီက အလှူငွေကောက်ခံပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ကိုဗစ် တတိယလှိုင်းအတွက် လှူဒါန်းပေးမယ့် Sinon Loresca